Ezona zixhobo zisixhenxe zebhodi emhlophe ezimhlophe ze-Android | Izikhokelo ze-Android
Ezona zixhobo zi-7 zibalaseleyo zebhodi emhlophe ze-Android
UIgnacio Lopez Sala | 09/05/2021 08:41 | IiApple zeApple
Ngobhubhane we-coronavirus, abaninzi babevela kubafundi abatshintshe amagumbi okufundela kumagumbi abo alandela unyaka wesikolo. Kuxhomekeke kudidi lwesifundo ekuthethwa ngaso, lo msebenzi ungangaphezulu okanye ube lula Ngokuchazwa ngutitshala.
Nangona kunjalo, xa sithetha ngezifundo ezinje ngezibalo okanye isayensi, apho umfanekiso ufanele ixabiso lamagama aliwaka, izinto ziya zisiba nzima ukuba asinakho ukubonwa kwenkcazo ngomfanekiso. Isisombululo kukusebenzisa Izicelo zebhodi emhlophe, izicelo ezivumela abafundi ukuba balandele iinkcazo ngokungathi babeseklasini.
Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela into eluncedo enalezi zicelo, kuba zikwindawo efanelekileyo xa ulapho usebenza kwiprojekthi nabanye abantu, ngokubonisa iindlela zokulandela, izisombululo kwiingxaki ezijamelene nendlela ...
Eyonaapps ilungileyo yokuthatha amanqaku
Izicelo zebhodi emhlophe ezidijithali zinokuguquguquka ngakumbi kuba ziyasivumela yongeza umxholo wemultimedia kwifomathi yevidiyo, umfanekiso, amakhonkco, izingqinisiso ... ke zikwalungile xa siququzelela umsebenzi weklasi, siphuhlisa iprojekthi ...
Njengolunye usetyenziso lolu hlobo, ukuba sifuna ukufumana okuninzi kolu hlobo lwesicelo, siya kuhlala sifumana olona khetho lufanelekileyo kwizicelo ezisivumelayo Qhubeka nomsebenzi wethu kwezinye izixhobo njengeekhompyuter, iipilisi ...
2 I-LiveBoard-Isicelo seWhiteboard eSebenzayo
4 Ibhodi yomlingo
Esinye sezona zicelo zigqibeleleyo esinokuzifumana kwiVenkile yokudlala ibizwa ngokuba yiMiro, iqonga le Ibhodi emhlophe yokusebenzisana kwi-Intanethi evumela amaqela ahlukeneyo ukuba asebenze kunye.
Iibhodi nganye esinokuzenza kunye nesi sicelo, sivumele ukuba songeze iifoto, amaxwebhu, amakhonkco, izingqinisiso ukwandisa ukuhamba komsebenzi emva kweklasi okanye intlanganiso iphelile.
Ngesicelo se-Android, sinokongeza amanqaku ancangathi esinokuthi sijike sibe ngamanqaku edijithali, sibambe izimvo kubhabho, sabelane ngeebhodi esizenzayo, mema amanye amalungu ukuba asebenzisane Kunye nabo, yongeza kunye / okanye uphonononge izimvo ezongezwe ngamanye amalungu eqela ...
Ezona zixhobo zi-5 zibalaseleyo zokufunda
Ithebhulethi usetyenziso isinika ubhetyebhetye obukhulu Ikwasivumela ukuba senze imizobo ngokulula, sisebenze kunye neefayile ngefomathi yePDF yokongeza amanqaku, siyisebenzise njengesikrini sesibini ngeZoom okanye iiMicrosoft Teams, iikhonsepthi ezikhoyo kunye / okanye iiprojekthi ...
IMiro iyafumaneka ukongeza kwi-Android, zombini IiWindows njengeMacOS. Ukukhuphela usetyenziso lwe-Android kukhululeke ngokupheleleyo, kunye nakwiWindows, iOS kunye neMacOS.
Inguqulelo yasimahla isinika iibhodi ezi-3 ezinokuhlelwa. Ukuba sifuna ukugcina zonke iibhodi esizenzayo, kufuneka sisebenzise enye yemirhumo esiyifumana kwi-8 yeedola.
I-Miro: I-canvas yebhodi emhlophe ekwi-Intanethi yamaqela akude
Umthuthukisi: Ibhodi yeXabiso
I-LiveBoard-Isicelo seWhiteboard eSebenzayo
Isicelo seLiveBoard siyasivumela yenza iintetho ezibukhoma nabafundi (Yenzelwe icandelo lemfundo). Ngexesha lokuqhubeka kweeklasi, sinokubuza abafundi ukuba baphendule ebhodini kwaye ngaloo ndlela bajonge ukuba bamamele.
Isicelo siyasivumela ukurekhoda imiboniso yevidiyo kwaye ke sikwazi ukubelana nabanye abafundi, siphonononge kamva, sipapashe kwiinethiwekhi zentlalo okanye ulayishe ngqo kwiYouTube kwaye usivumele ukuba simeme nabani na kwiiklasi ngokwabelana ngekhonkco eluntwini.
Ukuba asifuni ukuthetha ngeeklasi kwifomathi yevidiyo, sinako thumela ngaphandle iibhodi ezimhlophe ngqo kwifomathi yePDF. I-LiveBoard iyafumaneka ukhuphelo simahla kwaye isinika uvavanyo lweentsuku ezili-14 ukubona ukuba iyazifezekisa iimfuno zethu.
I-LiveBoard yokusebenzisana kwebhodi emhlophe
Umthuthukisi: I-LiveBoard LLC
Ukuba iimfuno zethu azihambi ngokusebenzisa usetyenziso olunenani elikhulu lemisebenzi kunye konke esikufunayo yibhodi emhlophe yedijithali Ukuziqhelanisa nezifundo ezineendleko ezinkulu nabantwana bethu, isicelo osikhangelayo yiWhiteboard.
Ngebhodi emhlophe unako bhala ngomnwe wakho kwiscreen yesixhobo sakho ukwenza imizobo echazayo, bhala iileta okanye iinombolo ... kwaye uyicime ngokulula ngokunqakraza kwi icon yokucima.
Eyonaapps ilungileyo yokwenza imizobo kunye neemephu zengqondo
IBhodi emhlophe iyafumaneka yeyakho khuphela simahla, kubandakanya iintengiso kodwa kungabikho kuthenga ngaphakathi nohlelo. Kwaye ayibandakanyi nayiphi na enye indlela esivumela ukuba sithumele ngaphandle imizobo esiyenzayo, kuba, njengoko benditshilo, ayisiyonto eyodlula ibhodi emnyama efana naleyo ikwisikolo kodwa yidijithali.
Umthuthukisi: IHira Studio
Ukuba ujonga isicelo sabantwana ukuba bazonwabise ukudweba nantoni na ehamba ngqondweni wakhoI-Magic Slate inokuba sisicelo osifunayo. Ngale sicelo sinokwenza imivumbo yebrashi yobukhulu obahlukeneyo esingakwaziyo ukuzoba kuphela, kodwa nombala.
Kuquka ukhetho lokulungisa imivimbo yokugqibela eyenziwe ngengozi. Ukongeza ekuvumela abantwana ukuba babonakalise ubuchule babo, ikwalungele Ukuphonononga amanani kunye neeleta, funda imibala… Isicelo siyafumaneka ukhuphelo simahla, kubandakanya iintengiso kwaye zifuna i-Android 4.1 ubuncinci.
Ibhodi emhlophe emhlophe edijithali kuGoogle yenza ukuba ifumaneke kuthi ngaphakathi kweG Suite yiJoardIsicelo esayanyaniswa nokufakwa kwesicelo sentlawulo kuGoogle yeenkampani kunye namaziko emfundo.
I-Jamboard ivumela abafundi kunye nootitshala sebenzani kunye kwibhodi enye, isenza isixhobo esihle kubafundi ekufuneka baqhubeke nokufunda ekhaya kwaye bafuna ukuvavanya abafundi babo ngexesha leklasi.
Eyonaapps ilungileyo yokuskena amaxwebhu kwi-Android
Isicelo sisinika ifayile ye- Inani elikhulu leendlela zokubhala kunye nemibala, Singabelana ngeebhodi nabanye abantu, kongeza amanqaku ancangathi, iifoto kunye nezincamathelisi kunye nokuqaqambisa izinto zebhodi ngesikhombisi.
Umthuthukisi: Google LLC
Uhlelo lokusebenza lwe-Whiteboard sisixhobo ilula kakhulu ukusebenzisa efanelekileyo emsebenzini, usuku nosuku okanye ukufunda. Ayisetyenziselwa ukubhalela nokwenza i-doodling kuphela, kodwa inokusetyenziswa njengephepha lokubhala, incwadana yokubhala yethutyana, ukwenza ukubala ...
Kukwalungele ukuba imfundo kubantwana abancinci, kuba iyasivumela ukuba siphonononge oko bakufundileyo esikolweni ngendlela emnandi eyahluke ngokupheleleyo. I-Whiteboard isinika iintlobo ezintathu zemivumbo kunye nemibala eyahlukeneyo, ke abancinci banokuyisebenzisa ukuzonwabisa.
Isicelo ivumela ukuba sigcine kwifomathi yomfanekiso wonke umxholo esiwubhalayo ebhodini ukuze sabelane ngawo nabanye abantu, uphonononge umxholo ukuba zizichazi ...
IBhodi emhlophe iyafumaneka yeyakho khuphela simahla ngokupheleleyo.
Esinye isicelo esinomdla esinaso njengebhodi emhlophe yedijithali ifumaneka kwi-MyViewBoard, usetyenziso esinokuthi silukhuphele simahla kwi-Android kwaye ayibandakanyi naluphi na uhlobo lweentengiso.
Ukuba usebenzisa ibhodi emhlophe yedijithali rhoqo kwaye ufuna ukufumana okuninzi kuyo nge-smartphone okanye ithebhulethi yakho, ngesi sicelo ungayenza ngokulula, kuba iyahambelana neebhodi ezimhlophe ezimhlophe ezivenkileni.
myViewBoard yenza ukuba ifumaneke kuthi inani elikhulu lokukhetha kunye nendlela yokufumana amanqaku njengeepensile, ukumakisha, izixhobo zokupenda, iisandwitshi, izikimu kunye nenani elikhulu lemvelaphi esinokuthi sigxininise kuyo indalo yethu.
Ukuze ufake le sicelo kwisixhobo sethu, kufuneka ilawulwe ngu I-Android 5.0 okanye kamva.
i-myViewBoard Whiteboard -Ibhodi yakho emhlophe yeDijithali
Umthuthukisi: I-ViewSonic Corporation
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Ezona zixhobo zi-7 zibalaseleyo zebhodi emhlophe ze-Android
Eyonaapps ilungileyo yokufunda iJografi kwiselfowuni yakho
Ungasifaka njani isandiso seGoogle Chrome kwi-Android